देउवा पक्षबाट को तोकियो महामन्त्री ? – GALAXY
देउवा पक्षबाट को तोकियो महामन्त्री ?
रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई १४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवार छान्न सकस पर्ने देखिएको छ।लामो समयदेखि आफूलाई साथ दिँदै आएका नेताहरूलाई पार्टी पदाधिकारीमा ठाउँ दिन यसपालि देउवालाई हम्मेहम्मे पर्नेछ।
महामन्त्रीमा धेरै नेताहरू आकांक्षी भएकाले उनीहरूलाई चित्त बुझ्दो तरिकाले व्यवस्थापन गरी आफ्नो टिमलाई चुस्त राख्न नसके देउवालाई महाधिवेशनबाट सभापति चुनिन थप कठिन हुनेछ।
कांग्रेसले मंसिर ९ गतेदेखि १३ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्दैछ। वडा अधिवेशन हिजोआज चलिरहेका छन्।एक कार्यकाल फेरि आफैँ सभापति हुने देउवाको तयारी छ। तर उनलाई २०७२ मा भएको १३ औं महाधिवेशनमा जस्तो सजिलो यसपालि छैन।देउवाले सभापति नछाडेपछि उपसभापति निधि सभापति उठ्ने तयारीमा लागेका छन्, बानेश्वरमा उनले सम्पर्क कार्यालयसमेत खोलिसकेका छन्।
निधिले साथ छाड्दा सभापतिमा फेरि उठ्न र जित्न देउवालाई पहिलेजस्तो सजिलो हुने छैन। १३ औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार कृष्णप्रसाद सिटौलाले सघाएपछि मात्र देउवा सभापति निर्वाचित भएका थिए।
यसपालि कांग्रेसमा कोषाध्यक्षबाहेक सबै पद निर्वाचनमार्फत् चुनिएर आउँछन्। पहिलेजस्तो मनोनित उपसभापति र महामन्त्री पद यसपटक विधानमा छैन।त्यसैले पनि महामन्त्री पदमा आकांक्षी धेरै छन्। सभापति देउवा र संस्थापनइतर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट पनि यसपालि महामन्त्रीमा धेरै दाबेदार छन्।
सभापति देउवा पक्षबाट सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, गृहमन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाण, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, कानुन मन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, केन्द्रीय सदस्यहरू एनपी साउद, रमेश लेखक महामन्त्री पदका आकांक्षी हुन्।
यीमध्ये कुनै एक नेता देउवाइतर हुँदा सभापति जित्न देउवालाई अप्ठेरो पर्छ। यीमध्ये अहिलेसम्म प्रवक्ता शर्माले महामन्त्री लड्ने औपचारिक घोषणा गरेका छन्। बिपी जयन्तीमा भदौ २४ मा सुन्दरीजल पुगेर शर्माले महामन्त्रीमा उठ्ने घोषणा गरेका थिए।
महामन्त्रीमा उठ्ने औपचारिक घोषणा गर्नुअगाडि शर्माले बालुवाटार पुगेर यसबारे सभापति देउवालाई जानकारी गराएका थिए। देउवा पक्षलाई एकजुट नै राखेर सकेसम्म सोही समूहबाट महामन्त्री लड्ने प्रयासमा शर्मा छन्।
सहमहामन्त्री महत पनि सकेसम्म महामन्त्रीमा लड्ने पक्षमा छन्। तर देउवा र टिमसँग छलफलपछि मात्रै उनले औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्। महामन्त्री पाइएन भने उपसभापति उठ्ने तयारीमा महत रहेको स्रोतको दाबी छ।
गृहमन्त्री खाण, केन्द्रीय सदस्यहरू एनपी साउद र रमेश लेखक पनि महामन्त्री पदका आकांक्षी हुन्। खाणको संगठनमा बलियो पकड रहेको मानिन्छ। २०४८ मै नेविसंघ सभापति रहेका साउद पनि संगठनमा बलियो छन्।यस्तै देउवालाई लामो समयदेखि सघाउँदै आएका लेखकको पनि संगठनमा राम्रै प्रभाव छ। साउद र लेखकको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संगठनमा राम्रो छ।
साउद यसपालि महामन्त्री आकांक्षी छन्। त्यसैका लागि उनी लामो समयदेखि सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्ला पुगेर संगठन सुदृढ गरिरहेका छन्। देउवानिकट साउद र लेखक दुबै महामन्त्रीमा उठ्ने तयारीमा छन्।
महामन्त्री उठ्ने तयारी गरिरहेको र टिमसँग छलफल गरेपछि औपचारिक रूपमै घोषणा गर्ने पक्षमा साउद छन्।यस्तै लेखक पनि देउवा र टिमसँग छलफलबाटै अगाडि बढ्ने तयारीमा छन्।‘सकेसम्म उहाँ महामन्त्रीमा उठ्नुहुन्छ,’ लेखकनिकट एक नेताले भने, ‘देउवा र टिममा छलफल गरेपछि औपचारिक निर्णय हुन्छ। तर उहाँ एक्लै घोषणा गर्दै हिँड्ने पक्षमा भने हुनुहुन्न।’
महामन्त्री उठ्न पाइएन भने लेखक सहमहामन्त्री उठ्न सक्ने स्रोत बताउँछ। तर लेखकले आफूनिकट नेताहरूसँग महामन्त्रीकै तयारी गरिरहेको बताउने गरेका छन्। ‘महामन्त्री उठ्न पाइएन भनेर देउवाको टिम छाडेर अन्यत्र जाने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न,’ लेखकनिकट स्रोतले भन्यो।
कानुन मन्त्री कार्की पनि महामन्त्रीका आकांक्षी छन्। देउवाले मन्त्री बनाएकाले महाधिवेशनमा महामन्त्री नउठ्न कार्कीलाई आग्रह गर्न सक्छन्।‘मन्त्री हुनेहरू सायद पार्टी पदाधिकारीमा उठ्न नखोज्लान्,’ सभापति देउवानिकट एक नेता भन्छन्, ‘कार्कीले देउवालाई सहयोग गरेरै जानुहुन्छ होला।’कार्कीले महामन्त्रीमा आकांक्षा राखे पनि यसबारे औपचारिक रूपमा व्यक्त भने गरिसकेका छैनन्।
कांग्रेसमा यसपालि कोषाध्यक्षमात्रै मनोनित गर्न मिल्छ। निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट एक जनालाई सभापतिले कोषाध्यक्ष प्रस्ताव गर्छन् र केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गरिनेछ।
१३ औं महाधिवेशनसम्म एक-एक जना उपसभापति र महामन्त्री मनोनित गर्न सकिन्थ्यो। त्यसले गर्दा देउवाले आफूलाई सहयोग गर्ने नेताहरू व्यवस्थापन गर्न सकेका थिए। देउवालाई यसपालि त्यस्तो सुविधा विधानले दिएको छैन।
कांग्रेसमा विधान नै संशोधन गरेर राजनीतिक निर्णयका आधारमा विजयकुमार गच्छदारलाई उपसभापति मनोनित गरिएको थियो। गच्छदार पक्षलाई यसपालि कांग्रेसले २१ हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता दिएको छ।
साथै राप्रपा छाडेर आएका सुनिलबहादुर थापालाई पनि कांग्रेसले राजनीतिक निर्णयका आधारमा सहमहामन्त्री नियुक्त गरेको थियो। थापा पनि पदाधिकारी लड्ने पक्षमा छन्। थापा पक्षबाट आएकालाई ७ हजारभन्दा धेरै क्रियाशील सदस्य दिने सहमति कांग्रेसमा छ।
देउवाले आफूलाई हरपल साथ दिएका नेताहरूलाई यसपालि चाहेर पनि पार्टी पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन्। चुनाव जितेर आउनुपर्ने बाध्यता छ। दुई उपसभापतिका लागि उपसभापति गच्छदार र महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का आकांक्षी छन्।कांग्रेसमा यसपालि सबैभन्दा रोचक प्रतिष्पर्धा महामन्त्री पदका लागि हुनेछ। युवा नेताहरू महामन्त्रीका लागि आमनेसामने हुने भएका छन्।
महामन्त्री उठ्ने घोषणा गरेका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा पौडेल पक्षसँग निकट देखिएका छन्। १३ औं महाधिवेशनमा थापा सिटौला पक्षबाट महामन्त्री उठेर शशांक कोइरालासँग पराजित भएका थिए। कोइराला पौडेल पक्षबाट महामन्त्री उम्मेदवार हुँदा देउवा पक्षबाट अर्जुननरसिंह केसी महामन्त्री उम्मदेवार थिए।
यसपालि वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षबाट सभापति को उठ्ने भन्ने अहिलेसम्म तय भइसकेको छैन। पौडेल, महामन्त्री कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला दाबेदार छन्। आफूहरूमध्ये सहमतिमै एक जना सभापति उम्मेदवार हुने पौडेल पक्षले बारम्बार बताइरहेको छ।
पौडेल पक्षबाट थापा महामन्त्री उम्मेदवार हुने देखिएको छ। हिजोआज पौडेल पक्षका भेला र पत्रकार सम्मेलनमा थापा पनि देखिन्छन्। महामन्त्रीमा केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल पनि दाबेदार छन्। चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरूङ, सरिता प्रसाईं पनि महामन्त्रीमा आकांक्षी छन्। महामन्त्री नपाए भण्डारी उपसभापति उठ्ने तयारीमा छन्।
यसपालि पनि सभापति उठ्ने तयारी गर्दैछन् पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला। १३ औं महाधिवेशनमा सभापति उठेर उनी पराजित भए। त्यसबेला पहिलो चरणमा कोही कसैले पनि ५१ प्रतिशत मत ल्याएका थिएनन्। सिटौलाले दोस्रो चरणमा देउवालाई साथ दिएपछि देउवा नै सभापति बनेका थिए।
सिटौला पक्षबाट थापा महामन्त्री नउठ्ने भएपछि केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल अगाडि बढ्ने भएका छन्। पौडेल केन्द्रीय क्रियाशील छानबिन समितिमा रहेर काम गरे। उक्त समितिले आइतबार काम सकेकोले अब छिट्टै महामन्त्री पदमा औपचारिक घोषणा गर्ने पक्षमा पौडेल छन्।
कांग्रेस महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरूङ र संगठन विभागका प्रमुख गोपालमान श्रेष्ठ पनि उठ्ने घोषणा गरिसकेका छन्। श्रेष्ठले देउवालाई लामो समय साथ दिँदै आएका थिए।